चीन भ्रमणको कोशेलीः सम्झौता २३, उपलब्धि कति ? सम्झौतै सम्झौतामा छोपियो पारवहनको प्रोटोकोल ! - BP Bichar
Home/विश्व/चीन भ्रमणको कोशेलीः सम्झौता २३, उपलब्धि कति ? सम्झौतै सम्झौतामा छोपियो पारवहनको प्रोटोकोल !
७ असार, बेइजिङ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एवं उच्चस्तरीय भेटघाट विहीबार सकिएको छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको जम्बो नेपाली टोली शुक्रबार ल्हासाको भ्रमणमा निस्कने र आइतबार स्वदेश फिर्ता हुने कार्यसूची छ ।
२०७५ असार ७ गते २२:३९ मा प्रकाशित (२०७५ असार ८ गते ७:५५मा अद्यावधिक गरिएको)
हङकङमा हालसम्मकै विशाल प्रदर्शन
देउवा रामचन्द्र सिटाैला भन्दा गाेविन्द जोशी अग्रणी नेता हुन् ।